Penillizer jelqing device (ကြီးရှည်လေ့ကျင့်စက်) - MM Online Shopping
salon 757 coupons awesome white elephant gifts under 20 49 shoes coupon code gift/talent rune wish gift boutique harrisburg nc
MM Online Shopping
All Categories Uncategorized Cockring Enlargement Pump For Women Lubricant Medicines Sex Accessory Sex Toys Sexy Wear
MM Customers Donation
Penillizer jelqing device (ကြီးရှည်လေ့ကျင့်စက်)
Penilizer ကိုအသုံးပြုပီး ပိုကြီး ၊ပိုထွားသော လိင်တန်အရွယ်အစားကို အရယူလိုက်ပါ လိင်တန်ကို နှိပ်နယ်ပေးပီး သဘာ၀အတိုင်းကြီးမားရှည်လျှားလာစေမဲ့ပစ္စည်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ ဘ်ေဒါတွေအတွက် penilizer လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျာ
နိုင်ငံတကာမှာလူကြိုက်များပီး သုံးစွဲသူတိုင်းရဲ့ ထောက်ခံချက်ကို အပြည့်အ၀ရရှိထားတဲ့ ပစ္စည်းလေးပါ You tube တွင်လည်း သုံးစွဲသူများစွာရဲ့ လက်တွေ့အသုံးပြုပီး ထိရောက်မှု ရှိတယ် ဆိုတာကို ပြသထားတဲ့ video များစွားကို လည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Penilizer ဟာ လူတွေ့နဲ့ ပစ္စည်းတွေ့ကို သိပ္ပံနည်းကျ အံ၀င်ခွင်ကျဖြစ်အောင် အကျိုးသက်ရောက်မူကောင်းအောင် ပုံစံထုတ်ရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြာင့် လက်ရဲ့လှုပ်ရှားမူ အကြိမ်အရေအတွက်နည်းနည်းနဲ့ ထိရောက်မူအများဆုံးကို ရစေပြီး အသုံးပြုသူကို သက်တောင့် သက်သာ ရှိစေပါတယ်
လိင်တန်ရဲ့အရွယ်အစားကို လျှင်မြန်စွာ တိုးတက်စေပီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုကောင်းမွန်စေပါတယ် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည့်မူရှိစေပါတယ်. စီလီကွန်နည်းပညာအသစ်ဖြင့် အသုံးပြုထားခြင်း ကြောင့်. နှိပ်နယ်မူကို တိုးမြင့်ပေးပြီး လိင်တန်အရေပြားအတွက်လည်း စိတ်ချစေပါတယ် ပစ္စည်းကို သန့်ရှင်းရေး ပြုရလွယ်ကူစေပါတယ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတွင် အသုံးပြုသော စံချိန်များနှင့် ကိုက်ညီသော စီလီကွန်ကို ရွှေးချယ်အသုံးပြုထားပါတယ် .
အသုံးပြုနည်း လိင်တန်ကို ချောဆီနှင့် ပွတ်သပ် သုတ်လိမ်းလိုက်ပါ ရေဓာတ်ကို အခြေခံသော ချောဆီကိုသာ အသုံးပြုပါ Penilizer ရှိ စီလီကွန်ကို ချောဆီအနည်းငယ် သုတ်လိမ်းပါ ထို့နောက် ပစ္စည်းကို လိင်တန်အရင်းကို ကပ်လိုက်ပါ ။
လိင်တန်အရင်းကနေ အောက်ကို တဖြောင့်တည်းဖိပြီး ဆွဲဆန့်လိုက်ပါ ။
နှိပ်နယ်ခြင်းကို လိင်တန် အောက် ၊ဘယ်၊ ညာ ၊ အပေါ် ကို တလှည့်စီ ဆွဲဆန့်လိုက်ပါ
ကိရိယာကို အလျားလိုက် နှင့် အောက် ၊ဘယ်၊ ညာ ၊အပေါ် ၁၀ ခါစီ ဖိပြီး ဆွဲဆန့်ပါ
ကိရိယာကို ထောင့်လိုက်နှင့် အောက် ၊ဘယ်၊ ညာ ၊အပေါ် ၁၀ ခါစီ ဖိပြီး ဆွဲဆန့်ပါ
အသုံးပြုပြီး အချိန် ကိရိယာကို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးပါ ။
ဆွဲရာတွင် လက်ကို အပေါ်သို့ဆွဲပါ ညစ်ပြီး ဆွဲပေးပါ လိင်တန်ကို မကွေးစေပါနဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ဆွဲပါ
မလေ့ကျင့်မီ လိင်တန်ကို ရေနွေး(ခံနိုင်လောက်သောပမာဏဖြင့်စွတ်ထားသော အ၀တ်စဖြင့် ၅ မိနစ်လောက် ပတ်ထားပေးပါ
၊ ပြီးမှာသာ ချောဆီဖြင့် ပွတ်သပ်ပေးပါ Gel တွေ့က လိင်တန်ကို ကြီးရှည်ဖို့အတွက် အထောက်အကူမပြုပါ ဒါပေမယ် ပြောင်းဆွဲရာတွင် အဆင်ပြေချောမွှေစေပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိစေပါတယ
လေ့ကျင့်နေရင်း ချောဆီ ခြောက်သွားပါက ချောဆီထပ်သုံးပေးပါ ပထမ ၁ပတ်တွင် လေ့ကျင့်ရမယ် အကြိမ်အရေအတွက်အတိုင်း အတိအကျ လေ့ကျင့်ပေးပါ လေ့ကျင့်ပြီးရင်လည်း လိင်တန်ကို ရေနွေး(ခံနိုင်လောက်သောပမာဏဖြင့်စွတ်ထားသော အ၀တ်စဖြင့် ၅ မိနစ်လောက် ပတ်ထားပေးပါ ပြီးမှာ အကြိမ်ရည် ကို တဖြည်းဖြည်းတိုးသွားပေးပါ
Penillizer jelqing device (ကြီးရှည်လေ့ကျင့်စက်) quantity
Category: Enlargement Pump
Be the first to review “Penillizer jelqing device (ကြီးရှည်လေ့ကျင့်စက်)” Cancel reply
Digital pump Silicon ဝါရှာ
Ks8,000.00 Add to cart
Ks40,000.00 Add to cart
Pressure pump (ဒိုင်ခွက်ပါပြောင်း) ချောဆီ ၁ဘူးနဲ့ ဝါရှာစုစုပေါင်း ၂ခုပါ
Ks28,000.00 Add to cart
bathmate Extreme X 40
Ks90,000.00 Add to cart
Download MM Online Shopping Application